Uhlelo lokukhishwa komuthi wokugoma lunezinkinga | Scrolla Izindaba
Uhlelo lokukhishwa komuthi wokugoma lunezinkinga
Uhlelo lokugomela i-Covid lwaseNingizimu Afrika lunezinkinga ngemuva kokuthi uhulumeni emise ukukhishwa komuthi wokugoma i-Johnson & Johnson (J&J) ngenxa yokwesaba emhlabeni wonke ukuthi lo muthi ungaholela ekudaleni kwamahluli egazi kubantu.
Inhlangano yokuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa eMelika (i-FDA) badinge ukuthi kumiswe okwesikhashana ukukhishwa kwemithi, bethi kubikwe amacala ayisithupha amahluli egazi atholakale ezigidini ezingu-6.8 zemithi.
Umuthi wakwa-J&J ube yingxenye esemqoka ohlelweni lokugoma lwaseNingizimu Afrika, ethole imithamo eyizigidi ezingama-30 ekupheleni kukaNdasa. Futhi yiwona kuphela umuthi wokugoma okwamanje osanikezwa abasebenzi bezempilo bezwe.
Ngakho-ke, isinqumo sikahulumeni sokumisa ukukhishwa sifaka uhlelo lwezwe lonke enkingeni.
Esitatimendeni esikhishwe ngoLwesibili, uNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Zweli Mkhize uthe “ENingizimu Afrika, asikaze sibe nayo imibiko yamahlule avele ngemuva kokugonywa, kanti lokhu kungemuva kokujova abasebenzi bezempilo abayi-289 787 ngaphansi kohlelo lweSisonke Protocol.”
Uphinde wagcizelela ukuthi ukumiswa kuzoba okwesikhashana kuphela, futhi ngeke kukubambezele kakhulu ukukhishwa kwemithi yokugoma yezwe.
“Ososayensi bethu banesiqiniseko sokuthi isinqumo se-FDA sisekuvikeleni futhi silindele ukuthi lokhu ngeke kuholele ekuhoxisweni okuphelele komuthi wokugoma wakwa-Johnson & Johnson.”
Lesi senzo sigxekwe kakhulu ngongoti bezempilo kuleli.
USolwazi wase-Wits University uFrancois Venter utshele i-Scrolla.Africa ukuthi, “Isinqumo ngomuthi wokugoma i-J&J asicabangisiswanga kahle.
“INingizimu Afrika ayisaleli emuva kuphela emhlabeni wonke, kodwa isalela emuva nakwingxenye enkulu ye-Afrika. Awukho umuthi wokugoma nowodwa osetshenzisiwe okwamanje, ngaphandle kwezifundo zocwaningo, ezizofika kuphela ngoNhlaba.”
UVenter, ongomunye wochwepheshe abahamba phambili ezweni ngaleli gciwane, uphinde waveza ukukhathazeka ngokuthi isinqumo sikahulumeni esisheshayo asizinaki izinzuzo ezibalulekile zomuthi wakwa-J&J, esho ukuthi “sidinga umuthi wokugoma owodwa ongamelana nochungechunge lwamakhaza, ezindaweni zethu zasemakhaya.”
Ngenkathi umuthi wokugoma we-Pfizer kufanele ugcinwe kusiqandisi esibanda kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kwangama -80°C kanye no -60ºC, kanti i-Johnson & Johnson ingagcinwa ezingeni lokushisa eliphakathi kuka 2ºC no 8ºC.
Uphethe ngokuthi, “Uhlelo luyinhlekelele okwamanje.”